Iileta zoGraffiti Graffiti Converter
Iileta zoonobumba begrafti
NgoJanuwari 1, 2021 0 IiCententarios 168
Iileta zoonobumba begrafti. ukuba yenza imithombo eyahlukeneyo Kwi-Instagram, vula iqonga, bhala okanye uncamathisele isicatshulwa sakho, uyijonge ngeendlela ezahlukeneyo, khuphela isicatshulwa kunye nefonti oyifunayo kwaye uncamathisele isicatshulwa I-Instagram, Facebook, Twitter, Youtube, WhatsApp, Twitch, TikTok okanye nayiphi na inethiwekhi yoluntu. Kukho ezinye iisayithi ezibonelela ngenkonzo.
Nangona kunjalo, Kukho izicelo zomntu wesithathu ezibonelela ngeendlela zabasebenzisi ukuba bathumele eminye imithombo. Qhubeka nathi ukwazi okungakumbi ngale ndlela kwaye ufunde indlela yokwenza Sebenzisa iifonti ezenza ukuba upapasho lwakho lube nomtsalane ngakumbi, kule meko iifonti zoonobumba begrafiti.
Iileta zoonobumba begrafti. Ukuba ufuna ezinye iindlela zokubhaliweyo ezihonjisiweyo, nje cofa "layisha iifonti ezininzi". Amathuba avela apha ahleli nje ngokungacwangciswanga, ahamba kancinci ukusuka kumgangatho kunye nokudibanisa izixhobo ezingafaniyo kwaphela, ii-emojis kunye neesimboli.
[Iileta zoonobumba beGraffiti] ➡️ Usebenzisa njani iifonti zesiko?
I-Instagram kunye nolunye uthungelwano lwasentlalweni luseka uhlobo lohlobo lohlobo olulungele inkqubo yoyilo ngokubanzi. Le yinxalenye yokuhambelana okuyimfuneko kwintuthuzelo ebonakalayo yabasebenzisi abakhangela ezi zixhobo.
Imigca yoonobumba begrafiti. Kuya kubakho indlela yokongeza oonobumba abathandwayo abalinganiswa abakhethekileyo, kunye nee-emojis kunye nezinye iisimboli. Ukuziqhelanisa, zibonakala njengamagama esiko, kodwa zibizwa ngokuba ziingcali Iimpawu ze-Unicode.
Iileta zoonobumba begrafti. Njengokuba zimnandi njengoko zinjalo, ukuzisebenzisa gwenxa kunokunika umbono wokuba iakhawunti yakho ayiqhelekanga.
Iileta zoonobumba begrafti. Siza kukubonisa inyathelo ngenyathelo, Zonke iindawo zalo mxholo zilandela umsebenzi ofanayo. Ke ngoko, kunokwenzeka ukuba ukhethe nayiphi na kuzo, kwaye umahluko ngokunxulumene nezigaba uya kuba mbalwa.
Iileta zoonobumba begrafti. Khumbula ukuba ukungahambelani komlinganiswa othile we-Unicode kunokwenzeka. Ke ngoko, qiniseka ukuba i-snippet ibonakala njengoko ufuna Kwaye ukuba kunjalo, lungelelanisa ukuze ungothusi abalandeli bakho.
Kwaye ungalibali Sebenzisa iileta ezinesitayile kwiprofayili bio, ukuba ufumanisa kufanelekile. Sebenzisa eli nqaku ukubandakanya abangabalandeli bakho kunye nokukhuthaza abalandeli bakho ukuba bathathe inyathelo elithile.
Akukho mda kwimfezeko! Kwanawona maxesha okuphumelela okuphumelela anokuguqulwa ngokungenammiselo, ukufikelela kwiifomathi ezintsha ye-Instagram.
Iileta zoonobumba begrafti. Ngaba wakha wazibuza ukuba abasebenzisi bongeza njani Imithombo ebonisiweyo kwiinethiwekhi zabo zentlalo? Ukuba wenze uphando nge I-Instagram, i-Twitter, i-Fb, i-WhatsApp okanye iTok Tok phakathi kwezinye, uyazi ukuba awunazinto zininzi unokukhetha kuzo xa kufikwa kumba wokwenza iileta okokoko kususela kwisicatshulwa sebhayiloji, amagqabantshintshi, iintloko, njl njl. banamagama asetiweyo.
Akukho zikhetho zokwenza ngokwezifiso kwaye uhlele ukuzenza zibenomdla ngakumbi, ngokweminqweno yakho, khululeka nje! Usenokusebenzisa iifonti zoonobumba begrafiti ngendlela emnandi nenomtsalane koku isiguquli.
F Iifonti zoonobumba beGraffiti, iifonti kunye nohlobo lohlobo
Sebenzisa iifonti zegrafiti . Unokwenza iifonti, uhlobo loonobumba, iileta, abalinganiswa kunye neesimboli engaqhelekanga kwimithombo yakho yeendaba zosasazo.
F Iifonti zoonobumba beGraffiti ukukopa kunye nokuncamathisela
Iileta zoonobumba begrafti ukukopa kunye nokuncamathisela. Singagqiba kwelokuba ngomvelisi wonobumba awuzifumani iifonti ngokwazo, ukuba nje ngoonobumba be-Unicode.
Converter Igraffiti isiguquli sefonti
Unicode yenzelwe i- jongana nomqobo obangelwe bubukho obugqithisileyo beeseti zekhowudi. Ukususela ekuqaleni kwenkqubo, abaphuhlisi basebenzise iilwimi zabo, ke ukuhambisa isicatshulwa ukusuka kwikhompyuter ukuya kwenye kuhlala kubangela ukulahleka kolwazi.
I-Unicode yenze umzamo omkhulu kwii-XNUMXs ukuya yenza iseti yomlinganiswa omnye kubandakanya inkqubo yokubhala iphela. Nika inani elithile kumlinganiswa ngamnye, nokuba yeyiphi iqonga, inkqubo kunye nolwimi.
Ke ngalo mvelisi weeleta zeeleta zegrafiti akazenzi iifonti, sebenzisa Iimpawu ze-Unicode onokuyisebenzisa kwi I-Instagram, iTwitter, iPinterest, iFb, iTumblr, iWhatsapp, iTikTok...
Umatshini wokuvelisa 🔥 Iifonti zoonobumba
1 [Iileta zoonobumba beGraffiti] ➡️ Usebenzisa njani iifonti zesiko?
3 Iileta zoonobumba begrafti
4 F Iifonti zoonobumba beGraffiti, iifonti kunye nohlobo lohlobo
5 F Iifonti zoonobumba beGraffiti ukukopa kunye nokuncamathisela
6 Converter Igraffiti isiguquli sefonti
7 Umatshini wokuvelisa 🔥 Iifonti zoonobumba